इलाम । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता सुवास नेम्वाङले एमालेले सभामुखसँग छलफल नगर्ने बताएका छन् । इलाममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेम्वाङले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् अवरोधको विषयमा सभामुखसँग छलफल नहुने बताएका हुन् । ‘सभामुखले रेफ्रिको भूमिका निष्पक्ष रूपमा निभाउनु भएन । अरूको हकमा एउटा निर्णय गर्ने, हामीले गरेको निर्णयको सूचना नटाँस्ने ? दुई […] The post सभामुखसँग एमालेको छलफल हुँदैन : सुवास नेम्वाङ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.
‘सुवास नेम्वाङ बार्गेनिङमा विश्वास राख्दैन’
चितवनः नेकपा (एमाले) को उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङले आफू बार्गेनिङमा विश्वास नराख्ने बताएका छन्। मनोनयनपछि कुरा गर्दै नेम्वाङले पार्टीको विवाद सडकमा राख्ने विषय नभएको पनि टिप्पणी गरेका छन्। पार्टीले उपाध्यक्षमा नै बस्न भनेकाले सोही पदमा मनोनयन गरेको उनले बताए। उनले भने, ‘सुवास नेम्वाङ बार्गेनिङमा विश्वास राख्दैन। केपी ओलीलाई अध्यक्षमा…
ओलीले विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ र बादललाई कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ?
काठमाडौं, ६ कात्तिक । नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनमा को कुन पदमा उम्मेदवारी बन्नेबारे बहस चलिसकेको छ । मंसिर १०, ११ र १२ गते चितवनमा आयोजना हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी मुख्य चासोको पद हो । ओली अध्यक्षमा दोहोरिने निश्चित नै छ । ओलीकै चाहना अनुसार बाँकी १४ पदमा पदाधिकारी निर्वाचित हुने अवस्था छ । एमालेमा […]
सभामुखमाथि हाम्रो आशंका छ: सुवास नेम्वाङ
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सभामुखप्रति आफूहरूको आशंका कायम रहेको बताएका छन्।
सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेलका कारण अध्यक्ष ओली दबाबमा, माधव नेपाल जवाफ कुर्दै
काठमाडौं, २२ साउन । नेकपा (एमाले) का दोस्रो तहका नेताहरुको दबाबका कारण एकताकोलागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल दुवै जना सकारात्मक देखिएका छन् । नेपाल समूहको हिजो र आज बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि एकताको लागि अधिकतम प्रयास गर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । आजको बैठकलाई समापन गर्दै नेता नेपालले अध्यक्ष […]
माधव नेपालसँग विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ वार्ता गर्दै, त्यसपछि ओली–नेपाल भेटवार्ता
काठमाडौं, २ वैशाख । नेकपा एमालेलाई फुटबाट जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट दुई प्रभावशाली नेता सक्रिय भएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ सक्रिय भएका हुन् । पौडेल र नेम्वाङले माधवकुमार नेपाल समूहका नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी बढाएका छन् । उनीहरुले सहमतिको बिन्दु तयार पार्ने विषयमा छलफल बढाएका छन् । नेकपा एमालेलाई […]
सुवास नेम्वाङ भन्छन्– संसद् विघटनबारे सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट बोल्छु
२३ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ मौन बसेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले उनको दुई वर्ष पुरानो अभिव्यक्ति भाइरल समेत बनेको छ । धुलिखेलमा त्यस बेला नेम्वाङले पत्रकारहरुसँग प्रधानमन्त्रीले चाहँदैमा यो संसद् विघटन नहुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अहिले पनि संसद् विघटनबारे बोल्न नेम्वाङलाई दबाव बढेको […]